काठमाडौं अपडेट : वडा नम्बर ११ को प्रारम्भिक नतिजामा सिर्जना अगाडि ! - jagritikhabar.com
काठमाडौं अपडेट : वडा नम्बर ११ को प्रारम्भिक नतिजामा सिर्जना अगाडि !
काठमाडौं महानगरपालिकाकोे वडा नम्बर ११ को मतगणना सुरु भएको छ । त्रिपुरेश्वर आसपासको क्षेत्र रहेको यस ठाउँमा नेवार समूदायको बाहुल्यता छ ।
यहाँको प्रारम्भिक मतगणनामा कांग्रेसकी सिर्जना सिंह श्रेष्ठ अगाडि देखिएकी छिन् ।
हालसम्म १०० वटा मत गणना सकिएकोमा सिर्जनाले ४३ मत ल्याएकी छिन् भने दोस्रो स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह छन् । उनले २२ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै, एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित १७ मतका साथ तेस्रो स्थानमा छन् । अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमीको ३ भोट मात्र आएको छ ।
काठमाडौंको मेयरका बालेन दोस्रो स्थानका स्थापितभन्दा १५४३५ मतले अघि छन् । सिर्जना पनि स्थापितभन्दा थोरै मतले पछि छिन् ।
सूर्योदयमा समाजवादीका राई र उपप्रमुखमा कांग्रेसका बराल निर्वाचित
इलामको सूर्योदय नगरपालिका प्रमुखमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का रणबादुर राई (आरबी) विजयी हुनुभएको छ ।
उहाँले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उम्मेदवार काजीमान कागतेलाई एक हजार ८५२ मतान्तरले पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो । काजीमानले १० हजार ५७९ मत ल्याउनुभएको छ । राईले १२ हजार ४३१ मत पाउनुभएको छ । उहाँ गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । राई यसअघिसमेत यस नगरपालिकाको प्रमुखमा हुनुहुन्थ्यो ।
उपप्रमुख पदमा पनि गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दुर्गाकुमार बराल विजयी बन्नुभएको छ । उहाँ ११ हजार ८५४ मतसहित विजयी हुनुभएको छ । उहाँकी निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेकी उम्मेदवार दुर्गादेवी भट्टराईले नौ हजार १२२ मत ल्याउनुभएको छ । भट्टराई निवर्तमान नगर उपप्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । १४ वटा वडा रहेको यो नगरपालिका जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह हो । यस पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै जिल्लाका सबै पालिकाको मतगणना सम्पन्न भएको छ ।
उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले राप्रपाकी हिमला गुरुङलाई १२ हजार २०० मत अन्तरले अग्रता लिनुभएको छ । अधिकारीले २९ हजार ५२५ मत प्राप्त गर्दा गुरुङले १७ हजार ३२५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । गणना सकिएका वडामा नेपाली कांग्रेसले १, २, ४, ५, ६, ८, १० र १४, नेकपा एमालेले वडा नम्बर ३, ११ र १२, नेकपा समाजवादीले ७ र ९ एवं नेकपा माओवादी केन्द्रले वडा नम्बर १३ मा विजय हासिल गरेको छ । हाल भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ र १६ को गणना जारी रहेको छ । गणना जारी वडामा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिनुभएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा एक लाख २७ हजार ८३९ मत खसेको छ ।